That's so good, right?: May 2012
ဆောင်းတွင်း တစ်ရက်ရဲ့ မနက်ခင်းတစ်ခုမှာ ကျွန်တော် စိုးရိမ်ထိတ်လန့်စရာ အိပ်မက်မှနိုးထလာပါတယ်။ ရင်တွေ တဆတ်ဆတ်ခုန်ရင်း အသက်မှန်အောင် ရှူရှိုက်ရင်း ထထိုင်ကာ ရေတစ်ခွက်ကို သောက်လိုက်ရတာပေါ့။ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုပေမဲ့ ကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိရတာ က ကျွန်တော့် အမျိုးသား သဘာဝပစ္စည်းဟာ အလွန်ကြီးမားသော အရွယ်အစားတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲနေတာကိုလေ။ အိပ်ယာပေါ် ပက်လက်လှဲနေရာကနေ ဦးခေါင်းကိုအသာမပြီး ပေါင်ခြံစီကြည့်လိုက်တော့ အညိုရောင်ကုန်းထနေသော တောင့်တင်းနေတဲ့ -ီးကြီးဟာ လေး(မြှား)ရဲ့ အခုံးကြီးတစ်ခုလိုပဲ ခုန်းထနေရဲ့။ ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေဟာ ပေါင်ခြံအတွင်း တနေရာရာမှာ မြင်ကွင်းက ပျောက်နေတယ်။
'ကျွန်တော် ဘာတွေများ ဖြစ်နေလဲ?' တွေးမိရပါတယ်။ ဒါ အိပ်မက်တစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ဘူး။ အခန်း...ကျွန်တော်နေတဲ့အခန်းဟာ သာမန် အခန်း တစ်ခုပါ။ နံရံလေးဘက်နှင့် ကာရံထားတဲ့ သေးငယ်သောနေရာလေး။ စားပွဲပေါ်မှာတော့ Lube ဘူးတစ်ခုက အဖုံးပွင့်လျက်၊ condom များနှင့် သေးငယ် သော အရုပ်လေးများပြန့်ကျဲနေတယ်။ နံရံပေါ်မှာတော့ မနေ့က print out လုပ်ခဲ့သောပုံကို ချိတ်ဆွဲထား ရက်သား။ သားမွှေး ဦးထုပ်ဆောင်းထားတဲ့ လက်ဖျံလောက်တုတ်တဲ့ ထိပ်အရေပြားဖြတ်ထားသော ငပဲကို မိုးပေါ်မတ်နေအောင် ထိန်း ကိုင်ထားရင်း မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ပုံလေ။
ကျွန်တော်ဟာ အဲဒီကောင်လေးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားအတိုင်းဖြစ်နေပါပေါ့လား။ ကျွန်တော် အိပ်ယာပေါ်က ခုန်ထကာ အခန်းနံရံမှာ ချိတ်ထားတဲ့ မှန်ရှေ့ မတ်တပ်ရပ်ကြည့်လိုက်တယ်။ ဟုတ်တယ် ဓာတ်ပုံထဲက ကောင်လေးနှင့် ထပ်တူ။ ၈လက်မထက် မနည်းရှည်သော လက်ကောက်ဝတ်ထက်တုတ်သော ငပဲနှင့်။ ကျွန်တော် ရေချိုးခန်းကို အမြန်ပြေး ကြွေကမုတ်ထဲ ဆီးသွားလိုက်ပါရဲ့။ အိပ်ယာထကာစ ဆီးသွားချင်လို့ အရွယ်အစားပြောင်းနေခြင်းလား စူးစမ်းတာလေ။ ရေချိုးခန်းကထွက်တော့ ငပဲက ၇လက်မလောက်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ရေချိုးရင်း တစ်ကိုယ်လုံးဆပ်ပြာတိုက်ရင်း ရှည်ထွက်လာတဲ့ ညီဘွားကို ကိုင်တွယ်ဆေးကြောရတာ ပျော်စရာတော့ကောင်းသား။ ကြည့် နေရင်း ကြည့်နေရင်း သာမန်ဆိုဒ်ကိုပြန်ဖြစ်သွားမလား စဉ်းစားကာကြည့်မိပါတယ်။ စိတ်ထလာမှ မယုံနိုင်စရာ ပြောင်းလဲသွားမယ်လို့ တွေးမိရတာကိုး။ ရေချိုးပြီးတော့ တစ်ကိုယ်လုံးခြောက်သွေ့အောင်သုတ်ကာ အိပ်ယာပေါ်လှဲလှောင်းရင်း ဘာလုပ်ရမလဲ စဉ်းစားမိပါရော။
သာမန် မဟုတ်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းကို သာယာမယ့်အစား မုန်းမိပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ပက်သက်မယ့် ပါတနာတိုင်းနှင့် အိုကေပါ့မလား? သက်ပြင်းအခါခါချရင်း ငြိမ်သက်နေမိစဉ်မှာပဲ အခန်းတံခါးခေါက်သံကို ကြားလိုက်ရပါတယ်။
'ညီညီ' ကျွန်တော့်ကိုလှမ်းခေါ်နေတာ အပြင်က။ အင်း...ကျွန်တော့် ဘော်ဒါ အောင်ဇော်လေ။ '၁၁နာရီတောင် ခွဲနေပြီ မင်း hung-over ဖြစ်နေလား? မင်းပြောတော့ ၁၀နာရီထိုးရင် အသင့်ဖြစ်နေမယ်ဆို'
ကျွန်တော် သူမေးတာကို detail ပြန်ဖြေချင်တယ်။ အရာအားလုံး ရှင်းပြချင်ပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး မသေချာတာကြောင့် မပြောဖြစ်တော့ပါဘူးလေ။
'Yea, Yea, ကျေးဇူး။ ကိုယ်အသင့်ဖြစ်နေပါပြီကွ'
ကျွန်တော် boxer ဘောင်းဘီတို တစ်ထည်မြန်မြန်ကောက်စွတ်၊ ခါတိုင်း ၀တ်နေကျ skinny jeans အစား ခပ်ပွပွ ဂျင်းတစ်ထည်ကိုဝတ် လိုက်ပါတယ်။ ဒါမှ ကြီးထွားလာတဲ့ပစ္စည်းဟာ နေရတာအဆင်ပြေမှာ။ အ၀တ်တွေ အမြန်လဲပြီး အခန်းတံခါးဖွင့်လိုက်တော့ တောင် တောင်အီအီ စဉ်းစားရင်း အပြင်က စောင့်နေတဲ့ အောင်ဇော်က ဘာလဲဆိုတဲ့မျက်နှာနှင့် ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေကိုကြည့်ရဲ့။ ခါတိုင်း ဘောင်းဘီဆို ဒီလိုဝတ်မှဆိုတဲ့ ကျွန်တော့်ပုံစံပြောင်းနေခြင်းကို စူးစမ်းတာ။ ကျွန်တော်တို့က အားလပ်ရက်ဆို မြို့ထဲသွားမွှေနေကြလေ။ ပြီးတော့ ပျော်စရာလေးတွေ ဖန်တီးရင်းပေါ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့ အရင်တုန်းကအတိုင်း မပြောင်းလဲဘူးလို့ ခံစားရတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ပေါင် ကြားက ညီဘွားအကြောင်း အာရုံရောက်မိလေတော့ ကိုယ့်နဂိုမူလဆိုဒ်ကို သံသယဖြစ်မိပါတယ်။
အောင်ဇော်ကတော့ ဒါမျိုးဆိုတတ်တယ်။ ကျွန်တော်လည်းတွေးမိပါရဲ့ နေရာကောင်းတစ်ခုမှာ အာရုံပြောင်းဖို့။ ကျွန်တော်တို့ ရုပ်ရှင်ရုံ တွေတန်းစီနေတဲ့အထဲက ဒုတိယမြောက် gay porn တွေကိုပြနေတဲ့ ရုပ်ရှင်ရုံထဲ လတ်မှတ်ဖြတ်ပြီး ၀င်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ခါတိုင်းလုပ်နေကျအတိုင်း တစ်နေရာစီခွဲထိုင်လိုက်တယ်လေ။ ကိုယ်တွေကို စိတ်ဝင်စားလို့ ဇာတ်လမ်းစချင်ရင် အဆင်ပြေဖို့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်မြင်နေရမဲ့ ခုံတစ်ခုစီမှာ ခွဲထိုင်လိုက်ကြတာ။ နည်းနည်း အသက်ကြီးတဲ့ လူလတ်ပိုင်းလောက် လူ တစ်ယောက် အောင်ဇော့်ဘေးမှာထိုင်ကာ မြူတော့ အောင်ဇော်သူ့ပစ္စည်းကို ဘောင်းဘီအပြင်ကိုထုတ်လိုက်တယ်။ သူက အသက် ၁၉နှစ်လောက်နှင့် ၇လက်မနီးပါးငပဲပိုင်ဆိုင်ရတာကို ဂုဏ်ယူနေတာလေ။ သူဘယ်တော့မှ ပြဿနာမဖြစ်ပါဘူး တခြားလူတွေကိုဆွဲ ဆောင်တာမှာ။ သူ ကျွန်တော့်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်တော့ မျက်လုံးတွေဝိုင်းသွားတယ်။ ဘာကြောင့်ဆို ကျွန်တော့်နံဘေးမှာ ထိုင်နေသူက ပိုများတာကိုး။
ကျွန်တော် ချောင်ကျကျနေရာကိုရွှေ့ထိုင်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အောင်ဇော်လုပ်တဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်လုပ်ဆောင်လိုက်တာပေါ့။ ကျွန်တော့်နဂိုမူလဆိုဒ်က အောင်ဇော့်ထက် တိုပြီး ပုံမှန် ၆လက်မ၀န်းကျင်ပဲရှိခဲ့တာ။ ဒါပေမဲ့ ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်တော်ပိုပြီး ယုံကြည်မှု ရှိနေပြီ။ ဂျင်းဘောင်းဘီကို အသာဇစ်ဖွင့်ပြီး လက်လျှိုထားတော့ ဘေးက လာထိုင်သူက ကျွန်တော့်ပေါင်ကို ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်ရင်း ငပဲကိုစမ်းတယ်။ သူ့နှုတ်ဖျားက အသံကျယ်ကျယ်ထွက်သွားရတာပေါ့။ 'အိုး....အထွားကြီးပဲ'
ခဏတွင်းမှာပဲ သူ..ကျွန်တော့် ဘောင်းဘီဇစ်ကိုဖွင့် ငပဲကိုအပြင်ထုတ်ကာ အားပါးတရကိုင်ပါတော့တယ်။ နောက်ဆုံး အဲဒီသူကပဲ ကျွန်တော့်ငပဲကို မှုတ်တာ ကွမ်းသီးခေါင်းကို သူ့စိတ်ကြိုက် ပါးစပ်ထဲသွင်းနိုင်ပြီး တစ်ခုလုံးကိုတော့ မနိုင်ဝန်ထမ်းချင်စိတ်မရှိ။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဆိုပါလူရဲ့ အစုတ်အမှုတ်ကျွမ်းမှုကြောင့် သိပ်မကြာဘဲ ပါးစပ်အပြည့်ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ တစ်စက်မှမကျန် လျှာဖြင့် သူလျက်သပေါ့။
ကျွန်တော် ဘောင်းဘီကိုဆွဲဝတ်ပြီး ထလာလိုက်တယ်။ အောင်ဇော်လည်း မကြာခင်မှာ လိုက်လာတာပေါ့။ 'မင်းသိပ်စွံတာပဲ ညီညီ၊ မင်းဘေးမှာ လူတွေဝိုင်းနေတာပဲ'
စကားဆက်မလိုလုပ်ပြီးမှ ကျွန်တော့်ဂျင်းဘောင်းဘီထဲက သိပ်မပျော့သေးသောပစ္စည်းကိုကြည့်ကာ ရပ်တန့်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော်နှင့် အောင်ဇော်တို့က လိင်ဆက်ဆံဖက်မဟုတ်ပေမဲ့ တစ်ယောက် ခန္ဓာကိုယ်ကို တစ်ယောက်က အစိမ်းသက်သက်မဟုတ်ပါဘူး။ man to man sex ကိုနှစ်ဦးစလုံးကြိုက်နှစ်သက်ကြတယ်ဆိုတာ သိရှိကြပြီး သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ခဲ့ကြတာ ကာလကြာခဲ့သလို အခုအသက် ၁၉ နှစ်မှာ အချိန်အတူဖြုန်းတာလည်း မကြာခဏပါပဲ။ အပြင်လောကကိုထွက်ပြီး လိင်ကိစ္စအတွက် ပါတနာရှာတော့လည်း အတူတူ။
'ဘာ...ဘာဖြစ်တာလဲ?' အောင်ဇော် အလန့်တကြားအော်တယ်။ ကျွန်တော်အားလုံးရှင်းပြရတာပေါ့ ဒီနေ့မနက်ဖြစ်ပျက်ခံစားခဲ့ရတာ တွေကို။
ကျွန်တော်ပြောတာတွေကိုနားထောင်ရင်း သူအားမလိုအားမရဖြစ်လာဟန်ဖြင့် ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီပေါ်ကနေ အသာစမ်းကြည့်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့မျက်နှာပေါ်မှာ သဘောကျဟန် အမူအရာပေါ်လာရော။ ဟိုအရင်အချိန်တချို့က ကျွန်တော်ကသာ သူ့ရဲ့ထွားကျိုင်းမှုကို အားကျနေခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးလား။ အခု ကျွန်တော့်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုအတွက် သူ တစ်မျိုးတမည်ထင်ပြီး သဘောကျနေတာဖြစ်မှာ။
'မင်း....၂စီစီလား ၃စီစီလား? ဘယ်နားသွားလုပ်ခဲ့တာလဲကွ ? ငါက အော်နော် ဟဟ'
'မရယ်နဲ့ကွာ...ဒါ သူ့ဘာသာ အလိုလို မနက်အိပ်ယာနိုးတော့ ဖြစ်နေခဲ့တာ'
ကျွန်တော့်လို ကျောင်းသားတစ်ယောက်အဖို့ ဒီလိုဆေးသွားထိုးတာမျိုး၊ ခွဲစိတ်တာမျိုးတွေ သွားလုပ်ရအောင်တတ်မှမတတ်နိုင်ခဲ့တာပဲ။ ပြီးတော့ အဲဒီလို ဆေးထိုးပေးတယ်ဆိုတာ တရားဝင်မှ မဟုတ်တာ။ တက်တူးထိုးသလို ဘယ်သူကတော့ လက်ရာကောင်းတယ်ဆိုပြီး သွားကြရတာမဟုတ်လား။ အခန့်မသင့်ရင် အဆမတန်ကြီးပြီး ယောက်ျားဘ၀တောင်ဆုံးသွားနိုင်တယ်။
'ငါ....ငါ ရှက်နေတာကွ...ပြီးတော့ ခါတိုင်းလို အရာရာမှာ မရဲသလိုပဲ'
'ညီညီကလည်း မင်းပစ္စည်းနဲ့ဆို အဖြူကောင်တွေအကြိုက်ဖြစ်မှာပေါ့။ မင်းပဲ ကျောင်းက Jason တို့အခန်းထဲက Alex ကိုသဘောကျ တယ်ဆို'
'အောင်ဇော်....မင်းဟာလေ ငါ့အကြောင်းသိရဲ့သားနဲ့ သဘာဝအတိုင်းမဟုတ်တဲ့ ကိစ္စဆို ငါဘယ်မှာအသားကျတတ်လို့လဲ'
ကျွန်တော်တို့ ရုပ်ရှင်ရုံထဲကအထွက် ကျွန်တော့်အခန်းကိုပဲပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီး Coke ဘူးအချို့နှင့် အာလူးကြော်ထုပ်တွေ ၀ယ်ပြီး အပြန် လမ်းကိုရွေ့ခဲ့ကြတယ်။ အခန်းကိုရောက်တော့ နောက်နေ့ကျောင်းစာတွေအတွက် ပြင်ဆင်၊ အိမ်စာအတွက် ဖတ်စရာမှတ်စရာ ရေးစရာ တွေကို လုပ်ဆောင်ပြီးသကာလ ထုံးစံအတိုင်း ကျွန်တော်က ညနေစာချက် အောင်ဇော်က ၀ိုင်းကူသလိုလုပ်ပြီး ကွန်ပျူတာသုံးကာ အွန်လိုင်းပေါ်တက်လေရဲ့။
ခဏနေတော့ မွေ့ယာပေါ် အသာလှဲရင်း စာဖတ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်နားကို အောင်ဇော်ကပ်လာတယ်။ ဘေးမှာ သူ အသာဝင်လှဲရင်း ည အိပ်ဘောင်းဘီပါးကြောင်း ပေါင်ကြားက ခုံးထနေတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကို လက်နှင့် အသာပွတ်သပ်ရင်း ကိုင်တွယ်ပါရော။ သူ့မျက်လုံးတွေ ဟာ တဖြည်းဖြည်းတောက်ပလာသလို အရောင်တစ်မျိုးစွန်းလာရဲ့။ နေ့လည်က ရုပ်ရှင်ရုံမှာ ပြီးခဲ့တာကြောင့် သိပ်မမာသေးတာတောင် ညီဘွားက အတော်ထွားနေတာ အခု သွားစနေပြန်ပြီလေ။
အား....လက်ဖ၀ါးရဲ့ နုညံ့မှုကြောင့်ရော ဘောင်းဘီစရဲ့ ပွတ်သပ်မှုကြောင့်ပါ ကျွန်တော့်ပစ္စည်း တဖြည်းဖြည်းခေါင်းထောင်ထလာတာ ဘောင်းဘီပေါက်ထွက်မတတ်ပါပဲ။ ဘောင်းဘီကို တဖြည်းဖြည်းလျှောချွတ် ပေါ် လာတဲ့ ငပဲကြီးကို သူ အားရပါးရကိုင်ကာ နှုတ်ခမ်းလွှာတွေထဲ သွင်းလိုက်ပါတော့တယ်။
'မင်းမနာဘူးလား ညီညီ...တစ်ခုခုလုပ်ထားတဲ့လူဆို သေလောက်အောင်နာနေဦးမှာ'
ဟင့်အင်....ကျွန်တော်မနာပါဘူး။ သူ့ရဲ့လျှာတွေ အာတွေထဲ မဆံ့မပြဲတိုးဝင်ထွက်နေတာ ဖီလင်အတော်ကောင်းတယ်။ ကွမ်းသီးခေါင်း ကိုပဲ အောင်ဇော်ချိုချဉ်စုပ်သလို တပြွတ်ပြွတ်စုပ်နေတာ။ ထိပ်ပေါက်ဝလေးကို လျှာဖြင့်ကလိရင်းပေါ့။ ကျွန်တော် သာယာနေရာကနေ မျက်စိကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တာ ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ်ပြန်မြင်လိုက်ရတဲ့ခဏ ရင်ထဲကြောက်လန့်စိတ်တွေဝင်လာပြီး ထထိုင်လိုက်ကာ ၀မ်းပန်း တနည်းငိုလိုက်မိပါတယ်။ ကျွန်တော်....ကျွန်တော် ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းဟာ ဘာကြောင့်များ ဖန်ဆင်းလိုက်သလိုပြောင်းလဲသွားရတာ လဲ ဘယ်လိုမှ လက်မခံနိုင်ဘူးဖြစ်နေရတယ်။ အောင်ဇော် ဘောင်းဘီကိုပြန်ဝတ်ပေးကာ ကျွန်တော့်ကိုသူ့လက်မောင်းတွေနှင့် ပွေ့ဖက် ပြီး နှစ်သိမ့်ပါ၏။
'ဘာမှ မစဉ်းစားနဲ့တော့ ညီညီ...ဒီညငါ့အခန်းမပြန်ဘဲအတူနေပေးမယ်။ မင်း အသားကျသွားမှာပါကွာ'
ကျွန်တော်ခါတိုင်းလိုမဟုတ် တက်ကြွမှုမရှိတာကို သူသဘောမကျဘူးထင့် ရယ်မောစရာဖြစ်အောင် ဟာသတွေနှောပြီး ကျွန်တော့်စိတ် တွေ အနည်ကျအောင် သူကြိုးစားပါတယ်။ ဟူး....တော်ပြီကွာ ဖြစ်လာမှတော့ ဖြစ်တဲ့အတိုင်း အဆင်ပြေအောင်နေရမှာပေါ့။
'နက်ဖြန်ညနေ ကျောင်းချိန်ပြီးရင် Sauna သွားမလား?'
'သွားမယ်လေ....ငါ့ အခန်းကိုလာခဲ့ အောင်ဇော် စောင့်နေမယ်'
နှစ်ဦးသား စကားတပြောပြောနှင့် အိပ်မောကျသွားတာ ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ကြတော့။ မနက်မိုးလင်းချိန်မှာ ကိုယ်စီလုပ်နေကျအတိုင်း ကျောင်းကိစ္စကိုပဲ ၀ဲလှည့်ကြပါတယ်။
ကျောင်းကအပြန် ကျွန်တော့်အခန်းမှာ အောင်ဇော် အလာကိုစောင့်ရင်း လိင်တံခွဲစိတ်မှုအကြောင်း ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖတ်မိပါတယ်။ လောလောဆယ်စိတ်ဝင်စားနေရသောအကြောင်းမို့။ ဆွဲဆန့်တဲ့ကိရိယာတွေသုံးရင် ငပဲကတစ်ရှူးတွေ ပျက်စီးသွားနိုင်သတဲ့။ ဆာဂျရီ လုပ်ဖို့ဟာ US လိုနိုင်ငံမျိုးမှာတောင် ကိန်းဂဏန်းက အများကြီးကုန်မှာ မွဲကျောပဲ။
'ဟေ့...ညီညီ Sauna သွားစို့'
ကျွန်တော့်စိတ်တွေက ပြောင်းလဲမှုမှာ အသားကျဖို့လိုအပ်တယ်။ ဒီတက္ကသိုလ်မတက်ချင်လို့ တခြားတက္ကသိုလ်ပြောင်းလို့ရပေမဲ့ သူ့ အလိုလို ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်ရာပြောင်းသွားတဲ့ ကျွန်တော့်ညီဘွားအတွက်တော့ သဘာဝလို့ လက်ခံမိစေဖို့ ကြိုးစားရမှာပါ။
အသက်အရွယ်စုံလူတွေလာလို့ရတဲ့ နာမည်ကြီး gay sauna တစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့သွားကြတာပါ။ မ၀င်မီ စားသောက်ဆိုင်စီ ဦးဆုံး ၀င်ကြတာပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့ ခါတိုင်းလို စတိုင်လ်ထွားပဲများမနေမိဘဲ အောင်ဇော်နောက်က တိတ်တဆိတ်သာလိုက်သွားဖြစ်ပါ တယ်။ အလင်းရောင် သိပ်မကွဲတဲ့ ရေနွေးငွေ့တွေထောင်းထောင်းထနေတဲ့ အခန်းထဲ။
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်မြင်ဖို့ဆို အလင်း ရောင်က နည်းပေမဲ့ အထိအတွေ့နဲ့တော့လှုပ်ရှားလို့ရပါတယ်။ ခါးမှာပတ်ထားတဲ့ တဘက်ကို ပခုံးပေါ်တင်ပြီး ဟိုစုစု ဒီစုစုလူတွေကြား ထဲ တိုးဝင် ကာ ချောင်ကျကျဘက် တိုးဝင်ခဲ့ပါရဲ့။ ဒီနေရာမှာ လူတွေက လက်တွေနှင့် နေရာအနှံ့ကိုင်တွယ်ရွေးချယ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း မသိမသာ နံရံအနားမှာ မှီရပ်ရင်း တစ်ယောက်ယောက်လာစမ်းတာကို ခွင့်ပြုဖို့စောင့်နေဖြစ်ပါရော။ ကျွန်တော့်စီကို ဦးတည်ပြီးလာနေတဲ့ လူတစ်ယောက်နားသွားလိုက်တော့ အဲဒီလူက ပျော့နေဆဲ ကျွန်တော့်ငပဲကို ကိုင်ကာ အသက်ရှူမှားရင်း 'ဘာကြီး ပါလိမ့်?' လို့ပြောဆိုသံကြားရပါတယ်။ လူအတော်များများလာကိုင်တာကို ခွင့်ပြုပြီးမှ နောက်ဆုံး စိတ်ပျက်လာကာ ရေနွေးစိမ်ကန်ကြီး ဘက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
ဘော်ဒီရှိုးကြာရှည်ပြမနေဘဲ ရေနွေးစိမ်ကန်ထဲ ဆင်းတဲ့ခဏပေါင်ကြားက ငပဲခတ်မတ်မတ်နှင့် အလန်းစားဘဲတစ်ပွေ ကျွန်တော့်နောက် ကိုသိပ်မကြာခင်မှာ လိုက်လာပါတယ်။ အဲဒီလူက ကျွန်တော့်ပစ္စည်းအတော်ထွားမှန်း သိနေခဲ့တယ်ထင်ပါ့။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲနည်းနည်း ပျော်ရွှင်လာသလိုပဲ။ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘာမှန်းမသိယုံကြည်လာတယ်။ ရေနွေးစိမ်ကန်ဘောင်ပေါ် အသာထိုင်နေလိုက်တော့ လိုက်လာတဲ့ဘဲက နံဘေးမှာထိုင်ရင်း သူ့လက်အစုံနှင့် ကျွန်တော့်ငပဲကိုဆွပြီး ကစားပါရော။ တဖြည်းဖြည်းထွားလာတဲ့ငပဲကိုကြည့်ရင်း သူ့မျက်လုံးတွေဝိုင်းလာပါတယ်။
ကျွန်တော်မတ်တပ်ရပ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ငပဲဆိုဒ်ဟာ သူထင်ထားတာထက်ထွားတယ်ဆိုတာ သိပ်မမာသေးပေမဲ့ မြင်သာနေပါပြီ။ ရေနွေးငွေ့တွေဝဲနေတဲ့ အခန်းထဲ ကျွန်တော်ပြန်ဝင်လာလိုက်ကာ ခြေဆန့်လက်သာရှိတဲ့ အခင်းခင်းထားတဲ့ကြမ်းပြင်ပေါ် စိတ်ဝင်စားစွာ လိုက်လာတဲ့ လူနှင့်အတူလှဲလိုက်ပါတယ်။ မလှမ်းမကမ်းနားမှာ အလကားထားပေးထားတဲ့ ကိုယူ ငပဲကိုစွပ်ကာ ဘေးတစောင်းနှင့် သူ့ ခရေ၀ကို ကျွန်တော့်ငပဲနှင့် ဖိတော့ အညှာအတာမရှိ ဖိသွင်းပစ်ပါ၏။ ကျွန်တော့်ဆောင့်သွင်းချက်တိုင်း သူအားရပါးရအော်ကာ ရင်ဘတ် ကို တွန်းပေမဲ့ အကြင်နာမဲ့လိုက်ပါတယ်လေ။ မိနစ်အတော်ကြာသည်အထိ ခပ်ကြမ်းကြမ်းကျွန်တော့်ပြုစုချက်ကြောင့်ထင့် တို့လို့တန်း လန်းမှာ သူ 'အ...အ...နာတယ်...တော်ပြီ' ဆိုပြီး ရုန်းကန်ကာ ထသွားတာပေါ့။
နာရီဝက်လောက်ကြာသည်အထိ ကျွန်တော် ဆုံးခန်းတိုင် ဇာတ်မသိမ်းရသေးပါ။ လူနှစ်ယောက်၊ သုံးယောက်လောက်ပြောင်းသည်အထိ သူတို့လိုအင်သည် ကျွန်တော့်ပစ္စည်းဆိုဒ်နှင့် သဟဇာတမဖြစ်။ အဖြူကောင်တွေနှင့် မတွေ့ရတာနာတာပဲ။ အား...စိတ်ညစ်လာပြီ သူများ တွေ ငပဲဆိုဒ်ကြီးလို့ အဆင်မပြေဖြစ်တာ ပြောသံသိပ်မကြားရဘူး ကျွန်တော်ပဲ အထူးတဆန်းဖြစ်နေတာ။ ကျွန်တော် နောက်ထပ်လူတွေ လာပြီး ဇာတ်လမ်းဆင်ပေမဲ့ စိတ်မပါတော့တာကြောင့် တဘက်ကိုခါးမှာပတ်လိုက်ကာ တခြားသူတွေလှုပ်ရှားနေတာကို မသိမသာ အရိပ် အခြည်ကြည့်ပြီး အာသာဖြေရတော့တာပေါ့။
ငနဲကြီးတစ်ပွေ ကုန်းကုန်းကွကွနဲ့ ခံနေပုံများ အားရစရာကောင်းသေး။ နောက်က ပို့နေတဲ့ ကောင်လေးကလည်း နွားသိုးကြိုးပြတ်သည့် အလားပါ။ ရှေ့က ငနဲကြီးရဲ့တင်ပါးကိုဖြဲ သူ့ငပဲကိုနှဲ့ပြီးသွင်းကာ အထုတ်အသွင်းလုပ်နေတာ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတောင် ဂရုမစိုက်တော့ဘူး လေ။
အိုးမိုင်ဂေါ့ သောက်ရမ်းသန်တဲ့ ကောင်လေးပါလား ရှေ့ကငနဲကြီးခမျာ ပါးစပ်ကိုဟပြီး အသံတောင်သိပ်မထွက်နိုင်ဘူး။ ကြည့်ရင်း. ....ကြည့်ရင်း ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် climax ဖြစ်ချင်လာသလို ငပဲထဲကအကြောတွေ တဆတ်ဆတ်ခုန်သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် အောင်ဇော် ကို လိုက်ရှာဦးမှပါဆိုပြီး အပြင်ခန်းတွေစီ လျှောက်လာတော့ အလွန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ငနဲလေးနှင့် ဇာတ်ရှိန်မြင့်နေတာကို တွေ့လိုက်ရပါ တယ်။ အဲဒီကောင်လေးလည်း အောင်ဇော့် တင်ပါးအိအိတွေထဲ ညီဘွားခပ်တုတ်တုတ်ကို အထုတ်အသွင်းခပ်သွက်သွက် လုပ်နေတာများ အောင်ဇော့်မျက်နှာက ပြုံးနေသလားမသိ။ ၁၀မိနစ်လောက်ကြာတော့ ခပ်အုပ်အုပ်အော်ညည်းသံနှင့်အတူ အောင်ဇော် တို့နှစ်ယောက် ဆန့်ငင်ဆန့်ငှင်ဖြစ်သွားကြတာ မြင်လိုက်ရပါတယ်။
ဟူး.....ကျွန်တော်ရပ်နေတာ အောင်ဇော်မြင်သွားချိန်မှာ အပြင်ကစောင့်မယ်လို့ လက်ဟန်ခြေဟန်နှင့်ပြပြီး ကျွန်တော်အ၀တ်လဲခန်းကို သွားခဲ့ပါတယ်။ ဂျင်းဘောင်းဘီဇစ်ကိုတပ် အတွင်းခံဘောင်းဘီထဲခွေနေတဲ့ငပဲကို သတိပြုမိရရင်းတွေးမိတာက မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်းကပါ လာတဲ့ ငပဲဆိုဒ်ကသာ ကျွန်တော့်အတွက် အဆင်ပြေပြီး လိင်မှုဘ၀မှာလည်း ပိုမိုသာယာခဲ့ရသလိုပါ။ အောင်ဇော်နဲ့သူ့ငနဲလေး အတူ လာရင်း အ၀တ်လဲနေကြကာ လိပ်စာကဒ်တွေလဲလှယ်နေကြပြီးမှ ကျွန်တော့်ဆီလာပြီး မိတ်ဆက်ပေးပါတယ် အောင်ဇော်ကလေ။
နှစ်ဦးသား စကားမဆိုဖြစ်ဘဲ ကျွန်တော့်အခန်းရှိရာကို ပြန်လာဖြစ်ကြပါတယ်။ အောင်ဇော်က ကျွန်တော်အဆင်ပြေရဲ့လား၊ မင်းနဲ့အိုကေ တဲ့ပါတနာရခဲ့သလားတဲ့။ ကျွန်တော့်အကြိုက်ကို သိရဲ့သားနဲ့မေးနေပြန်ပြီ။ အနောက်တိုင်းသား အဖြူကောင်တွေနဲ့ဆက်ဆံဖို့ဆို ဘယ် တုန်းကမှ မနှစ်သက်ခဲ့တာပဲကို။ ကျွန်တော်နေတဲ့အခန်းဝထိလိုက်ပို့ပြီး အောင်ဇော်က 'good night!' ဆိုကာပြန်သွားပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်တော့ ၀တ်ထားတဲ့ အ၀တ်ဟူသမျှကို ချွတ် ရေချိုးခန်းထဲဝင်ကာ တစ်ကိုယ်လုံးဆပ်ပြာမြှုပ်ဖွားဖွားပါအောင်တိုက်ကာ အချိန် အတော်ကြာရေချိုး ပစ်လိုက်ပါရဲ့လေ။
'၀ါး...' တနေကုန် သောင်းကျန်းထားလို့ထင်ပါရဲ့ အ၀တ်အစားလဲလှယ်ပြီး ခုတင်ပေါ်သက်သောင့်သက်သာ လှဲလျောင်းလိုက်တာနှင့် အိပ်ချင်စိတ်က ဖြစ်လာတော့တာပဲ။ အခန်းပြတင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ကောင်းကင်ကို ဟိုးခပ်ဝေးဝေးမှာတွေ့ရတယ်။ နီယွန် မီးရောင်တွေကသာ ကျွန်တော်နှင့် နီးကပ်နေတာ။ အခန်းနံရံက မီးခလုပ်ကိုပိတ် မျက်လုံးများကို မျက်ခွံတွေနှင့်လွတ်လပ်စွာ ပိတ်စေ လိုက်ပါတယ်။
'ဒေါက်..ဒေါက်' အခန်းထဲ ဘယ်သူလမ်းလျှောက်နေတာလဲ ပြတင်းတွေရော အခန်းတံခါးတွေကော သေချာသော့ခတ်ထားတာပဲဟာ။ ကျွန်တော့်မျက်ခွံတွေကလေးနေလိုက်တာ အိပ်ချင်စိတ်က ပိုကဲနေတာကြောင့်။ ခြေသံက ကျွန်တော်ရှိရာကိုလာနေတာပဲဗျ။ နံဘေးဘီရို ပုပေါ်က မီးခလုပ်ကို လက်နှင့်အသာစမ်းပြီးဖွင့် လူလည်း ရုတ်တရက်ထရပ်လိုက်တာ ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေ ပြူးကျယ်သွားရပါရော။ နံရံ ပေါ်ကပ်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံထဲက မော်လ်ဒယ်အရှင်လတ်လတ် ကျွန်တော့်ရှေ့မှောက်ရောက်နေတာဗျ။ သူ့မျက်နှာက ကျွန်တော့်ကိုတပ် မက်တဲ့ အကြည့်တွေနှင့် မြှူဆွယ်နေပြီ။ ခပ်လျော့လျော့အိပ်ယာပေါ်လှဲနေတဲ့ ကျွန်တော့်စီ သူတွားပြီးတက်လာတယ်။ ရင်တွေအရမ်းခုန် လာတယ် ခပ်ဖွဖွ ကျွန်တော့်ခြေဖျားတွေကနေတစ်ဆင့် ပေါင်ခြံဆီအနမ်းပေးနေတာ။ သွေးကြောတွေထဲက တဆတ်ဆတ်တုန်လာတဲ့ အထိ သူဘယ်လိုများ ခံစားစေပါလိမ့်။ ကျွန်တော့်ညီဘွားဟာ တဖြည်းဖြည်းနှင့် ထွားကြိုင်းမတ်ထောင်လာပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရွှေဥ တွေကို တစ်လုံးခြင်းငုံစုပ်တယ်၊ ပြီးတော့ ခပ်ထွားထွား ညီဘွားကို သူ့အာခံတွင်းထဲအရောက်သွင်းပါရဲ့။ ကွမ်းသီးခေါင်းကို လျှာနှင့် ဝေ့ ၀ိုက်လိုက် ငပဲတစ်ခုလုံး သူ့လည်မျိုထဲထိ နှဲ့သွင်းလိုက် ဖီလင်အတော် good တယ်။ လက်တစ်ဖက်ကလည်း ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေကို ဆက်လက် ပွတ်သပ်သေးတာ။ 'အိုး....အာ...ရှီး 'တစ်နေကုန် စုထားသမျှ အခုသူ့လက်ထဲမှာ အဆုံးသတ်တော့မယ်။ လည်မျိုထဲထိ ငပဲ ကိုသွင်းသွင်း ပြီး ကစားပေးတာလေဗျ။
'မင်းဆီငှားထားတဲ့ဟာ ငါပြန်ယူတော့မယ်' ဘာပြောတာလဲ? '..အ....အား...အ' သူ့ပါးစပ်ထဲကို ရေပိုက်နှင့်ပန်း သည့်အလား သုတ်ရည်တွေကို အားရပါးရသွင်းလိုက်ပါတယ်။ ဒါကို သူမကျေနပ်နိုင်သေးပဲ ဆက်ပြီးစုပ်မျိုနေသေးတာ။ နည်းနည်းအချိန် ပိုကြာလာသလားဆိုပြီး ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ သူ ကျွန်တော့်ငပဲကို သွားထက်ထက်တွေနှင့် ကိုက်
'ညီညီ...ညီညီ မနိုးသေးဘူးလားကွ? မင်းပြောတော့ မနက် ၁၀နာရီဆို အသင့်ပြောပြီး'
အိပ်ယာပေါ်က အမြန်ထ ဘောင်းဘီတို တစ်ထည်ကောက်စွတ်ပြီး အခန်းတံခါးကို သွားဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ အောင်ဇော်ရယ် ကျောင်း ကြောပိုးအိတ်နှင့် ကသောကမျောဝင်လာပြီး အိမ်သာဘက်ကို လှမ်းကြည့်ရင်းပါလာသမျှ ကုတင်ပေါ်ပစ်တင်ကာ ၀င်သွားပါရဲ့။ အိမ်သာ ထဲမှ ပြန်ထွက်လာပြီးနောက် ဘာမှ အသင့်မဖြစ်သေးတဲ့ ကျွန်တော့်ကိုကြည့်ကာ
'အမ်...ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာလဲ နံရံက ဓာတ်ပုံရောက်လို့ ပြီးတော့ အရည်ပျစ်တွေ....မင်းစောစောစီးစီး ဟိ'
Alex Aung (4 April 2011)
Posted by Alex Aung at 10:24 PM No comments:
နွေးထွေးတဲ့ အိပ်ယာပေါ်မှာ ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်အိပ်၊ ညာဘက်ကိုစောင်းအိပ်အိပ် ဘယ်လိုအနေအထားနှင့် လှဲလျောင်းပါစေ ကိုယ်ခန္ဓာကို သက်သောင့်သက်သာရှိစေတယ်ဆိုရင် အိပ်မောကျသွားတဲ့အဆင့်ကို သူ့အလိုလို အနှေးနှင့်အမြန်ရောက်ရှိသွားမယ် လို့တော့ ကျွန်တော်ထင်မိပါတယ်။
Wow! ကျွန်တော့်ငပဲက ညီဘွား မခေါ်နဲ့ မကြိုက်ဘူးဆိုပြီး ခေါင်းထောင်ထထာတာ လည်တံကိုမော့နေရော။ ကျွန်တော်-ွင်းမထုဖြစ် ခဲ့တာ တော်တော့်ကိုကြာပြီပဲ။ အလုပ်ကိစ္စတွေနှင့် ဇယားရှုပ်နေခဲ့ခြင်းကြောင့်လေ။
ကျွန်တော့်စိတ်ကူးထဲမှာတော့ ကိုကြီး သူငယ်ချင်း ဇေယျာဆိုတဲ့ ငနဲက -ိုးနေတယ်လို့ မြင်ယောင်မိနေရော။ ခပ်ကျဉ်းကျဉ်း အပေါက် လေးက မထင်မှတ်စွာ ရုတ်တရက်ဆိုသလို ကျွန်တော်သူ့ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ အိမ်ကိုပါလာတဲ့တစ်ရက် ကျွန်တော့်အစ်ကို့ အခန်းထဲ အ၀တ်လဲနေတာ တံခါးကို စေ့စေ့မပိတ်ဘဲနဲ့လေ။ ကျွန်တော်အသံမထွက်အောင် ငြိမ်နေရင်းချောင်းကြည့်နေခဲ့တာပေါ့။ တီရှပ်ကို ဦးခေါင်းကနေဆွဲချွတ်တော့ ပေါ်လာတဲ့ ရင်အုပ်တွေ၊ ဗိုက်ကြွက်သားအမြှောင်းမြှောင်းတွေက အားရစရာပါ။ ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကို ကြည့်မိတော့....အိုး...ခပ်တုတ်တုတ်ငပဲက တရမ်းရမ်းဖြစ်နေပါတယ်။ လိင်တံထိပ်အရေပြားဖြတ်မထားတော့ ရင်ခုန်ဖို့ပိုကောင်းရ တယ်နော်။ ပျော့နေတဲ့အခြေအနေမှာတောင် အနည်းဆုံးငါးလက်မလောက်ရှိမယ်။
ပူနွေးချွဲပျစ်တဲ့ သုတ်ရည်တွေ ကျွန်တော့်ငပဲထိပ်ဝကနေ လေးလျော့လောက် ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မထိန်းသိမ်း နိုင်စွာပဲ နှုတ်ဖျားက ညည်းညူသံတွေ ကျယ်လောင်စွာထွက်သွားရော။ ဘယ်သူကြားကြား ကျွန်တော် ဂရုမစိုက်မိတော့။ ကျွန်တော် အားရပါးရ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုအဆုံးသတ်ခြင်း။ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ ပန်းဝင်ဦးမလား ယောင်ရမ်း ဟ မိပါသေးတယ်။ ကျွန်တော့်ဗိုက်သား ပြင်၊ ဆီးစပ်တလျောက်တော့ သုတ်ရည်တွေအိုင်ထွန်းနေတာပေါ့လေ။
နောက်ဆုံးတော့ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်မောကျကာ အိပ်မက်ကမ္ဘာဆီသို့ အသွား......။
Posted by Alex Aung at 9:53 PM No comments:
လိင်တူကြိုက်သူ၊ လိင်တူရောလိင်ကွဲပါကြိုက်သူနှင့်လိင်ပြောင်းလဲထားသူများမှာမည်ကဲ့သို့သောဘ၀မှ လာသည်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့်လူမျိုး၊ မည်သည့်ဘာသာကိုကိုးကွယ်သူဖြစ်စေ၊ မည်သည့်စီးပွားရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြု၍ မည်သည့်အရပ်တွင်နေထိုင်သည်ဖြစ်စေ ၄င်းတို့မှာ လူအများထဲမှ လူများပင်ဖြစ်၍ အများသူငါနည်းတူကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ကျန်းမာရေးအသိပညာတန်းတူရထိုက်သည်။
ယခုနောက်ပိုင်းသုတေသနပြု လေ့လာဆန်းစစ်မှုများအရ ၄င်းတို့မှာ သာမန်လူများထက်ပင် အချို့သောရောဂါများရရှိရန် အခွင့်အလမ်းပိုများနေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ ဥပမာ- အမျိုးသမီးလိင်တူကြိုက်တူများတွင် ရင်သားကင်ဆာအဖြစ်များ၍ အမျိုးသားလိင်တူကြိုက်တူများတွင် ဆက်ဆံရာမှတဆင့် ကူးဆက်သောရောဂါများအဖြစ်များသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ၄င်းတို့၏ကျန်းမာရေးအတွက် လိုက်နာအပ်သည်များကို ဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။
လိင်တူကြိုက်ခြင်း၊ လိင်တူရောလိင်ကွဲကြိုက်ခြင်းနှင့်လိင်ပြောင်းလဲထားခြင်းသည်ရှက်စရာမဟုတ်ပါ။ ငြိုငြင်ခံဖွယ်ရာမဟုတ်ပါ။ အားငယ်စရာမဟုတ်ပါ မိမိကျန်းမာရေးသည်အဓိကဖြစ်၍ ပုံမှန်စစ်ဆေးမှု ဖျားနာလျှင် ဆေးကုသမှုခံယူပါ။
၂။ မရှက်ပါနှင့် မကြောက်ပါနှင့်။
ဆရာဝန်နှင့်ပြောဆိုဆက်ဆံရာတွင် မိမိ၏ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်နှင့်ခံစားနေရသောရောဂါဖြစ်စဉ်ကို မကွယ်မ၀ှက်ပြောရဲပါစေ။
ကျားဟော်မုန်း၊ မဟော်မုန်းပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ကိုယ်စီကိုယ်ငှရှိကြသည်။ မဟော်မုန်းသည် သွေးခဲပျစ်စေ၍သွေးတိုးစေသည်။သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကိုမြင့်မားစေရုံမက လူကိုပါဖော်သွပ်၍၀စေသည်။ကျားဟော်မုန်းများမှာ အသည်းကိုပျက်စီးစေတတ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဟော်မုန်းဆေးများကိုမိမိသဘောနှင့်မသုံးစွဲပါနှင့် နားလည်သောဆရာဝန်နှင့်ပြသတိုင်ပင်ပါ။
ဟော်မုန်းများကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ဆေးလိပ် အရက်တို့ကြောင့်သော်လည်းကောင်း အ၀လွန်ခြင်း၊သွေးတိုးခြင်း၊ လေဖြတ်ခြင်း၊ နှလုံးရောဂါတို့ဖြစ်တတ်သည်။ ထို့ကြောင့် အနည်းဆုံး ပုံမှန်သွေးပေါင်ချိန်ခြင်းကိုပြုလုပ်ပေးပါ။
အဖြစ်နည်းသော်လည်းဟော်မုန်းများကြောင့် ကင်ဆာဖြစ်နိုင်သောကြောင့် မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုပုံမှန်ဂရုပြုစစ်ဆေးပါ။သံသယဖြစ်ဖွယ်အလုံးအကျိတ်အဖုများပေါ်လာပါက နားလည် တတ်ကျွမ်းသော ဆရာဝန်နှင့် ပြသတိုင်ပင်ပါ။အချိန်မီကုသမှုခံယူပါ။
လိင်ဆက်ဆံရာမှတဆင့် ကူးဆက်တတ်သောရောဂါများကိုကာကွယ်ရန်အတွက်မည်ကဲ့သို့ သဘာဝမဟုတ်သည့်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုပြုစေကာမူအကာအကွယ်ယူခြင်းသည် သာစိတ်အချရဆုံးဖြစ်သည်။ HIV နှင့် ကာလသားရောဂါ STD ပါပုံမှန်(သုံးလတစ်ကြိမ်)စစ်ဆေးပါ။ အသည်းရောင်အသားဝါဘီကာကွယ်ဆေးထိုးထားပါ။
ဟော်မုန်းဆေးသုံးစွဲနေသူများ၊ ဆေးလိပ်အရက်ပါသုံးစွဲလျှင်နှလုံးရောဂါ၊လေဖြတ်ခြင်းနှင့် အသည်းရောဂါဖြစ်ရန် အခွင့်အလမ်းပိုများတတ်သည်။ မသုံးစွဲလျှင်ကောင်းသည်။ သုံးစွဲနေလျှင် လျော့ချရန်ကြိုးစားပါ။
၈။ စိတ်ပူပန်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း။
ပတ်ဝန်းကျင်၏ပုတ်ခတ်မှုကြောင့်အဖြစ်များသောပြဿနာဖြစ်သည် မည်သူတို့ကမည်သို့ပင်ဆိုစေ မိမိဘ၀ကိုမိမိသာလျှောက်လှမ်းရသည်ဖြစ်၍စိတ်ကိုပျော်ရွှင်ကျန်းမာပါစေ။စိတ်ပျို၍ ကိုယ်နုသည်ဖြစ်၍ အချိန်မှန်အိပ်၊ အချိန်မှန်စား၊ လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်၊ အားလပ်ချိန်နား၍ သဘာဝအလှအပများကို တစ်ဝခံစားပေးပါ။ မိတ်ဆွေများနှင့် မကြာခဏတွေ့ဆုံပါ။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးများမွေးမြူကြင်နာပါ။ အားလပ်ချိန်၌ ၀ါသနာပါရာ (ဥပမာ-ပန်းစိုက်ခြင်း) ပြုလုပ်၍စိတ်အပန်းဖြေပါ။
၉။ အစားအစာနှင့် လေ့ကျင့်ခန်း။
အများသူငါနည်းတူအဟာရပြည့်ဝသောအစားအစာ၊ နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းနှင့် လတ်ဆတ်သောသစ်သီးဝလံများစားသုံးပါ။ တစ်နေ့လျှင်မိနစ်သုံးဆယ်ခန့်နှင့် တစ်ပတ် ၅ ရက်ခန့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုပြုပေးပါ။
Health Care Journal Vol-3 No.14 Page9တွင်ရေးသားထားသော စန္ဒီ(ဆေး-၂) ၏ဆောင်းပါးမှကူးယူဖော်ပြပါသည်။
LGBT - လိင်တူကြိုက်သူများသိသင့်သည့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလိုက်နာဖွယ်ရာများ
Posted by Alex Aung at 2:57 PM No comments:
I Had to Convince Him!
ညက တော်တော် တိတ်ဆိတ်နေတာပါ။ မြို့စွန်ရပ်ကွက်လို့ မထင်ရဘဲ နယ်မြို့လေးတစ်မြို့ရောက်နေတဲ့အတိုင်း မီးရောင်က ခပ်မှိန်မှိန်ဖြစ်နေတာလေ။ ကျွန်တော်တောင် မျက်လုံးတွေမှေးပြီး အိပ်ချင်နေပြီ။ ပတ်ဝန်းကျင်က အသံတွေက မကြားတစ်ချက် ကြားတစ်ချက်ပေါ့။
'Shit! ငါတော့ အိပ်ငိုက်လာပြီကွာ မိုးဇော်' ကျွန်တော့်ဘေးက ကားမောင်းသူခုံမှာ ကားလက်ကိုင်ဘီးပေါ် မျက်နှာအပ်ပြီးငြိမ်နေတဲ့ ချစ်သူငယ်ချင်းကို ပြောလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ မိုးဇော့် အိမ်နှင့် မနီးမဝေး လမ်းဘေးတစ်ဘက်မှာ ထိုးရပ်ထားတာ ကားကို။ ညအပြန်နောက်ကျနေတာကြောင့် မိုးဇော်မိဘတွေအိပ်ချိန်အထိ စောင့်ဆိုင်းနေမိကြတာပါဗျ။ စောစောပြန်ခဲ့ကြလို့ ပြောထားတာကိုနော်။
'ဒီတစ်လိပ်က နောက်ဆုံးလက်ကျန်ပဲထင်တယ် ငါ့ကောင'် စီးကရက်ကို တစ်ဖွာနှစ်ဖွာ ဆက်ဖွာပြီး ကျွန်တော်သတိပေးသလို ပြောမိရတယ်။
'အေး...ကုန်လည်းကောင်းတာပဲ' တဲ့ မိုးဇော်ကပြန်ပြောတယ်လေ။
မိုးဇော် ကားကို လမ်းပေါ်ကို ဖြည်းဖြည်းလှိမ့်တင်လိုက်ရင်း ခြံဝင်းတံခါးဘကအသာမောင်းဝင်လိုက်တယ်။ အချိန်အတော်ကြာ ထိုင်ခဲ့ရ တာကြောင့်လားမသိ ဆီးသွားချင်သလိုလိုနှင့် ပေါင်ကြားထဲ ညီဘွားက ဘောင်းဘီပေါက်မတတ် မာတောင်ပြနေရဲ့။ အင်း...ဒီညတော့ အိပ်မပျော်သေးခင် ညာဘက်လက်ကို လေ့ကျင့်ရေးဆင်းခိုင်းရဦးတော့မှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ဦးသား လိင်ကိစ္စကို သိပ်ဆွေးနွေးလေ့ ရှိတဲ့ ဘော်ဒါတွေမဟုတ်တော့ မိုးဇော်တို့ အိမ်ဝင်းထဲကားမောင်းဝင်တဲ့ ဆယ်မိနစ်လောက်သောအချိန်ဟာ တိတ်ဆိတ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်က မိုးဇော်ရဲ့ မိဘတွေအိမ်မှာ သူနှင့်အတူ နေဖြစ်နေတုန်းပါပဲ မြို့ထဲအခန်းအတူငှားဖို့ အခန်းဖော်ရမှ ပြောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။
မိုးဇော်က ကားမောင်းအတော်ညက်တာများ အိမ်ကြီးရဲ့ နံဘေးမှာ ထိုးရပ်ပြီး တံခါးတွေပိတ်လိုက်ချိန်ထိ ဘာသံမှ မကြားရပါဘူး။ လူကြီး တွေကို မနိုးထစေတာကောင်းတာပေါ့။ နှစ်ယောက်သား တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နှင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခန်းထဲရွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။
အခန်းဖွဲ့စည်းပုံအရ မိုးဇော်က သင်္ဘောသား အိပ်စင်တွေလို အိပ်ယာကို လုပ်ထားတာမှာ ကျွန်တော်က နည်းနည်းအပေါ်ဘက်ကျတဲ့ ခုတင်မှာ အိပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အမြဲလိုလို ဟာသလုပ်ဖြစ်တာက တစ်ခါတလေအိပ်မက်စိုတွေမက်လို့ ကျွန်တော့် သုတ်ရည်တွေ သူ့အပေါ် ပန်းကျမိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့။ မိုးဇော်က အလန့်တကြား ဘာပြောလဲသိလား 'ငါ့ကောင် မင်းဖာသာမင်း အဲ့ပေါ်မှာ -ွင်း ထုချင်ထု၊ ငါ့စောင်တွေထဲတော့ ပန်းမထည့်နဲ့နော်' ဆိုပါလား.....ဟိ။
ကျွန်တော်တို့ နှစ်ဦးသားက အတွင်းသိအစင်းသိဆိုတော့ ဘာကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ အ၀တ်တွေချွတ်ပြီး ကိုယ့်ခုတင်ကိုယ် လှမ်းတက် လိုက်ကြပါတယ်။ ကုန်ဆုံးခဲ့တဲ့ ၁၄ ရက်စလုံး ဒီပုံစံအတိုင်း ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းခဲ့တာပါ။ အလုပ်ချိန်ပြီးနောက် ကားကိုလျှောက် မောင်း၊ ငြီးငွေ့ပြီဆိုမှ အိမ်ကိုနောက်ကျမှပြန်ပေါ့လေ။ ကျွန်တော် အိပ်ယာပေါ်အသာလှဲရင်း မိုးဇော်ဘက်ကို အသံနားစွင့်နေမိတယ်။ သူ တစ်ခုခုလုပ်ရင် ကြားရမယ့်အသံကို ငံ့လင့်မိရင်းဆိုပါတော့။ မိုးဇော်က သူအိပ်မပျော်ခင် အမြဲလိုလို အိပ်ယာထဲမှာ -ွင်းထုပြီးမှ အိပ်လေ့ ရှိတယ်။ ကျွန်တော်က သူ့အထက်နားမှာအိပ်တာဆိုတော့ ညတိုင်းသူလှုပ်ရှားရင် သိနေတာအမြဲ။ သူက စောင်ပါးတစ်ထည်ကို ခြုံထားပြီး မှထုတာဆိုတော့ တစ်ခါတလေ စောင်က ဘေးလျောကျနေတော့တာ။ ခပ်တိုးတိုး အသံလေးကို ကြားနေရတာက ကျွန်တော့်ကို turn-on ဖြစ်စေ သလို မိုးဇော်တစ်ယောက်ဘယ်လိုများ အဆုံးသတ်လဲ စိတ်ကူးကြည့်ရင်း တစ်ပြိုင်တည်းလို ကျွန်တော်လည်း ဇာတ်လမ်းဆုံး အောင် ကြိုးစားမိတယ်ဗျ။မိုးဇော်က အသံကျယ်ကျယ် ထွက်တဲ့အထိတော့ လှုပ်ရှားလေ့မရှိပါဘူး။ အတော်တိတ်ဆိတ်တဲ့ -ွင်းထုသမား ပါပဲ။ ဒီည ရာသီဥတုက ပူသလို စိတ်ကထန်နေတော့ မိုးဇော်ထုနေတာပိုပြီး ပြည့်စုံသွားအောင် အောက်ဆင်းပြီး ကူညီရမလား ဆန္ဒဖြစ်မိ ပါတယ်။ဘယ်တုန်းကမှ ကျွန်တော် ဒီညဘောက် စိတ်မထန်ဖူးဘူး။ ဆီးမသွားသေးဘဲ လိင်တံတောင့်တင်းနေခြင်းက ဒီရူးနှမ်းတဲ့ စိတ်ကူး အထမြောက်အောင် ဆင်ခြေကောင်းတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့တယ်။
'ဆီးသွားချင်နေတဲ့အခါ ငါ့လိုပဲ စိတ်ထန်လာတတ်လား'
'ငါတော့ တကယ့်ကိုမာတောင့်နေတာပဲ၊ စိတ်လည်းအရမ်းထန်၊ မင်း -ွင်းထုနေတာလား မိုးဇော်'
'ကောင်းတယ်ကွ၊ အေးဆေးလွှတ်ထားစမ်းပါ ကိုမျိုးရာ ငါက အဲဒါမှအပြီးသတ်မှာ'
အခုတော့ မိုးဇော် -ုနေတာကို ကျွန်တော်သိသလို ကျွန်တော်-ုနေတာကိုလည်း မိုးဇော်သိသွားပြီပေါ့။ သူ့မွေယာရဲ့ လှုပ်ရှားသံကိုကြားရ သလို အိပ်ယာခင်းတွေရဲ့ ပွတ်တိုက်သံကိုလည်း ကျွန်တော် သေသေချာချာကြားနေရတယ်။ ကျွန်တော်သည်လည်း ကိုယ့်ဖာသာ တစ်ကိုယ်လုံးပွတ်သပ်ရင်း ခုတင်ကို တချွတ်ချွတ်အသံမည်စေကာ အိပ်ယာပေါ်တွန့်လိမ်နေမိပါရဲ့။ ကျွန်တော့်သွေးသားတွေ ဘယ်လို ထကြွသောင်းကျန်းနေပါလိမ့်...အာ..အ။ ကျွန်တော်...ကျွန်တော့်စိတ်တွေ ဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ အခုသိပြီ။ မိုးဇော်...မိုးဇော်ရဲ့ -ီး ကို စုပ်ချင်နေတာ။ အခုမှဘာအရူးထမိလဲမသိပါဘူးဗျာ။ သူကိုတိုက်ရိုက်မေးရအောင်လည်း ရှက်တယ်..ဘော်ဒါအချင်းချင်း အထင်သေး သွားမှာလည်းစိုးရိမ်မိသေးတယ်။ သူလည်း ခံစားချက်တစ်စုံတစ်ရာရှိမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါရဲ့လေ။
'အင်း...တစ်ခုခု အကူအညီ မလိုဘူးလား'
'ကောင်းပြီလေ...ဒါပေမဲ့ မင်းသဘောပါ 'ကျွန်တော့်လေသံက ပျော့သွားရဲ့။
'ဘာလဲ မင်း ငါ့-ီးကို စုပ်ချင်နေတာလား...ဟား ဟား' မိုးဇော့်အသံက တစ်ခုခုကို ကောက်ချက်ဆွဲထားတဲ့လေသံနှင့်။
ကျွန်တော် စကားပြောနေတာကိုရပ် မတ်ထောင်နေတဲ့ ကိုယ့်ငပဲကိုကိုယ်ကိုင်ကာ ခပ်ဖြေးဖြေးပွတ်သပ်နေမိပါတယ်။ ခုတင် အောက်ကို ဆင်းပြီး သူ့ဆီလာစေချင်နေတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့ အဲလိုလုပ်တာတွေဟာ စောက်ခြောက်တွေလုပ်တဲ့ အလုပ် ကိုလုပ်မိနေခြင်းလို့ အထင်တစ်ခုဖြစ်ရမှာ သူကြောက်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်မှာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဂရုမစိုက်ဘူး။ နှစ်ယောက်သား အပြိုင်-ွင်း ထုနေမိကြခဲ့ကတည်းက တစ်ယောက်ဖီလင် တစ်ယောက်ပိုကောင်းသွားအောင် ဘာကြောင့်အချင်းချင်း အသုံးမပြုနေတာလည်း စိတ်ထဲ တွေးမိခဲ့တယ်ဆိုပါတော့။ မိုးဇော်နှင့် ပတ်သက်ပြီး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွဲဆောင်မှုဆိုတဲ့ ခံစားမှုမရှိ။ တစ်ယောက်ပစ္စည်းတစ်ယောက် အသုံးပြုချင်ခဲ့ယုံသာ။ အခုအခြေအနေထက်ပိုအောင် တွန်းအားပေးဖို့ ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ။
'အတူတူပဲ...စိတ်တွေမတရား ထန်နေတုန်းပဲ။ ငါ့ကုတင်ပေါ်ကဆင်းလာပြီး မင်းဆီလာရင် ဘာလုပ်မှာလဲဟင်'
ကျွန်တော့်ကို ပြန်ပြောတဲ့ သူ့လေသံထဲမှာ လှိုက်မောနေဟန်တွေ ကြားရတော့ သူအရမ်းစိတ်ထန်နေမှန်း ကျွန်တော်မှန်းဆလို့ရပါတယ်။ သူ့ငပဲကို လာပြီး စုပ်မှုတ်ပေးစေချင်သလို စကားကမ်းလှမ်းတာဟာ ဆီလျော်ပါရဲ့။ ကျွန်တော် ဟိုဟိုသည်သည် စကားတွေထပ်မပြောဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး ခုတင်ပေါ်က ဆင်းလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကြမ်းပြင်ပေါ်က ကော်ဇောအစွန်းကို ခလုတ်တိုက်မိပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ် ဖင် ထိုင်ကျရော။ ကြမ်းပြင်ပေါ် ထိုင်ရက်သားကျတာကြောင့် တင်သားဆိုင်တွေကို ခပ်ပြင်းပြင်း ရိုက်ခတ်ခံရသလို ခံစားမိသလိုပဲ။ ကျွန်တော် ဒူးထောက်ထလိုက်ပြီး မိုးဇော် ခုတင်ပေါ်ကြည့်လိုက်တော့ ခုတင်ပေါ်မှာ ဖရိုဖရဲလှဲလျောင်းပြီးစောင်ပါးတစ်ထည်လွှမ်းထားတဲ့ သူ့ကိုမြင် ရပါတယ်။
စောင်ပါးက အိပ်ယာခင်းသာသာဆိုတော့ အဲဒီ့အောက်မှာ လှုပ်ရှားနေတဲ့ သူ့လက်အစုံကိုမြင်နေရပါတယ်။ ကျွန်တော် သူ့ကိုဘာ ပြောရမှန်းမသိတာကြောင့် 'မင်း...ပြီးကာနီးပြီလား'
'အကူအညီလိုလား' တုန့်ပြန်မှုမရှိ။ ဒါပေမဲ့ သူ့လက်ကစားမှုကိုဆက်လုပ်နေပါတယ်။
'စောင်ကို ဖယ်လိုက်ပါလား' ကျွန်တော ယတိပြတ်ပြောပစ်မိရော။
'မင်းတော်တော် နှာဘူးကျတဲ့ကောင်' မိုးဇော် ပြောသာပြောတာ အိပ်ယာခင်းကို လွှင့်ပစ်တယ်ဗျ။
'ငါလည်းသိတယ်...ငါကြိုက်မယ်ဆိုတာ။ ငါ အဲဒါကို ကြိုက်နေတာက ပြဿနာတစ်ခုပဲကွာ'
ကျွန်တော့်ကို စကားပြန်ပြောရင်းမှာ သူ့လက်ကငပဲထွားထွားကို ဖြည်းဖြည်းပွတ်သပ်နေတာမြင်ရမှ သူ့ငပဲမတ်ထောင်တာ ဘယ် လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ မြင်နိုင်တော့တယ်။ အဲဒါကြှီးက ၆လက်မလောက်ရှည်၊ ထိပ်အရေပြားဖြတ်ထားပြီး တော်တော် တော်တော့်ကို တုတ်တာပဲဗျ။ ရွှေနီငှက်ပျောသီးကြီးရဲ့ အလယ်ပိုင်းကဟာလိုမျိုးလေ။ တော်တော့်ကို မာနေတာ ကျောက်သားဆိုင်လိုပဲထင်တယ်။
ရုတ်တရက် မိုးဇော်က 'မင်း ဒီနားလာထိုင်မှာလား' ပြောတယ်။ ကျွန်တော် ဒူးထောက်ထိုင်မိနေရာကနေထကာ မိုးဇော်နားသွားကာ သူ့ ငပဲကိုလှမ်းစမ်းကိုင်လိုက်တယ်။ မိုးဇော် သူ့လက်တွေကို အိပ်ယာပေါ်ပစ်ချလိုက်တာ ကြိုက်သလိုလုပ်တော့ဆိုတဲ့ သဘော။ ကျွန်တော် သူ့ငပဲကို အားရပါးရဆုပ်ကိုင်ကာ ဖျစ်ညှစ်ပွတ်သပ်မိတော့ ပိုပိုပြီးမာလာသလို ခံစားရတယ်ဗျ။ ကျွန်တော့် ကိုယ်ပိုင်ငပဲလိုတော့ ဖြောင့် စင်းမနေဘူး။ ပွတ်သပ်ရတာကတော့ လက်တဆုံးဆိုရမလို တော်တော်ရှည်သေးတယ်လေ။ သူ့နံဘေးနားအဆင်ပြေဆုံး အနေအထား နဲ့နေရာယူလိုက်မှ သူ့ငပဲကိုအားရပါးရပိုကိုင်ရတာပါ။ သူ့ငပဲကို အမျိုးမျိုးကစားပြီး သူ့ဇာတ်လမ်း အဆုံးသတ်အောင် စပြီးကြီုးစားပေး နေခဲ့ခြင်းပေါ့နော်။
'ဘယ်လိုထင်လဲ ဘော်ဒါ' သူပြန်ပြီး အဖြေပေးပုံက အသံထဲမှာလှိုက်မောနေသလိုလိုဆိုတော့ သူကြိုက်နေတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော့်ကို ပြောပြနေသလိုပါပဲ။
'ဘယ်လိုမှ ဖီလင်မလာသေးဘူးလား ပြီးဖို့ကို'
'ငါ မင်း-ီးကို-ုပ်ပေးရင်ကော အကူအညီသဘောဖြစ်မလား'
'ဘာလုပ်လုပ် ဂရုမစိုက်ဘူးကွာ....ငါ အာရုံစိုက်ပါရစေဦး'
ကျွန်တော် မိုးဇော့်ငပဲကို ခပ်သွက်သွက် ကစားပေးပါတယ်။ သူ့လေသံကိုကြားရတာတော့ ကျွန်တော့်အတွက် ကျေနပ်မှုမဖြစ်စေပါဘူး။ သူ့သုတ်ရည်တွေ အများကြီး အခုပဲပန်းထုတ်စေချင်တာလေ။ ကျွန်တော် လက်ကစားနေတာကို ရပ်ပြီး နီရဲနေတဲ့ သံခမောက်လေး မှောက်ထားသလိုဖြစ်နေတဲ့ ငပဲထိပ်ဖူးကို ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ နည်းနည်းလေးညှစ်ပြုကြည့်ပြီး အရည်ကြည်မထွက်သေးတာသေချာမှ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ကို ကွမ်းသီးခေါင်းနား ကပ်လိုက်ပါရဲ့။ နုညံ့သောအသားချောင်းကြီးရဲ့ ထိပ်ပိုင်းလေးကို လျှာဖျားလေးနဲ့ အသာတို့တို့ ပြီး ကလိလိုက်တယ်။ ထိပ်ပိုင်းတစ်ဝိုက်ကို ရစ်ရစ်ပြီးလျက်သလို ငပဲတစ်ချောင်းလုံးရယ် ရွှေဥတွေရယ်ကိုရော ပြီးတော့ ခရေ၀နား မရောက်တရောက်ကိုပါ ကလိတာလည်းပါရဲ့။
'အဲဒါ...အရမ်းကောင်းတာပဲ' မိုးဇော်ခမျာ ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုမျိုး ဗလုံးဗထွေးပြောရော။
ကျွန်တော် သူ့ငပဲကိုကိုင်ထားတဲ့ လက်ကိုလွှတ်လိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းတွေလျှာတွေအာတွေသုံးပြီး အာခေါင်ထဲထိ သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက် ပေါ့နော် ဆက်လှုပ်ရှားလိုက်ပါတယ်။ သူ့လိင်တံတစ်ချောင်းလုံး မျိုချလိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိတယ်။ မိုးဇော်လေ အောက်ဆီဂျင်ကို အငမ်းမရရှုတယ် သူ့ငပဲဟာ ကျွန်တော့်အာသီးကို ဖြတ်သန်းဝင်ရောက်သွားချိန်မှာပေါ့။ မိုးဇော်ရဲ့ ငပဲထွားထွား ကျွန်တော့်ပါးစပ်မှာပြည့်နေတဲ့ ဖီလင်ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဗျ။ ကျွန်တော့်စိတ်တွေ အရမ်းထန်နေခဲ့ပြီဆိုတော့ မိုးဇော်ငပဲ အကာ အကွယ်မရှိ ပါးစပ်ထဲဝင်ထွက်နေတာကို ဂရုမပြုမိတော့သလို သုတ်ရည်တွေ ပန်းထုတ်လိုက်မှာကိုလဲ မကြောက်တော့သလိုပါပဲ။ မိနစ် အနည်းငယ်ကြာတာတောင် မပြီးနိုင်သေးတဲ့ မိုးဇော်ဆီက အသံတွေ ပိုထွက်လာသလို ဘာထပ်ပြောလဲသိလား? 'အဲလိုလေး...ခဏ... ခဏ ဆက်လုပ်ပေးလို့မရဘူးလား' တဲ့လေ။
'အိုကေ၊ ဒါပေမဲ့ ငါ့ကိုမပြောဘဲနဲက ဇာတ်လမ်းဆုံးပြီ မပြောရဘူးနော်'
မိုးဇော် တံတွေးတွေရွှဲနေတဲ့ သူ့ငပဲကို အားရပါးရကိုင်ပြီး -ွင်းထုတာမှာ ဘက်ဘယ်လောက်တောင်သွက်သလဲဆို ရိပ်ကနဲ ရိပ်ကနဲပဲ။ ၁ မိနစ်လောက်ကြာပြီးနောက်မှာ မိုးဇော်က 'ငါ...ငါပြီးတော့မယ်' တဲ့ပြောတယ်။
မိုးဇော် သူ့သုတ်ရည်တွေကို ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲပန်းထည့်ကာ ပြီးချင်နေတာကို ကျွန်တော်သိနေတယ်။ သူ့ အသက်ရှူနေခြင်းဟာ ပိုပိုပြီးပြင်းထန်လာသလို ပိုပြီးတော့ ပြတ်တောက်ပြတ်တောက်လည်းဖြစ်ရဲ့။
ကျွန်တော် ခပ်မြန်မြန်ပဲ သူ့ငပဲကို ကိုင်ပြီးပါးစပ်ထဲကို ငုံစုပ်လိုက်တာ မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်း ပေါက်ကွဲတော့မတတ် မာတောင်နေတဲ့ အသားချောင်းကြီးဟာ တဆတ်ဆတ်ခါလို့။ အဆုံးသတ်တော့မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိနေလည်း သူ့ငပဲတစ်ချောင်းလုံးကို လည်မျို ထဲထိတိုင် သွင်းလိုက် အပြင်ပြန်ထုတ်လိုက်၊ တစ်ချက်တစ်ချက် သူ့ငပဲချောင်းနှင့် ရွှေဥတွေကို နှုတ်ခမ်းသားတွေနှင့် ပွတ် လျှာတွေ နဲ့လျက်ပြုရသေးတာပါ။ ကျွန်တော့်လက်တစ်ချို့က သူ့ဆီးစပ်က အမွှေးနုလေးတွေကို ပွတ်သပ်မိပြန်တော့ မိုးဇော်ခမျာ တွန့်ကနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားသေးတာပါပဲ။
'ငါ...ငါပြီးတော့မယ်' မိုးဇော် အသက်မမရှူရတော့သလိုပြောတယ်ဆက်တိုက်။ ကျွန်တော် သူ့ငပဲအရင်းကို ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ကာ ဆီးခုံကိုပြေးကပ်တော့မယောင်ဖြစ်နေတဲ့ ရွှေဥတွေကို တပြွတ်ပြွတ်စုပ်လိုက်ပါတယ်။ ငပဲထိပ်ပိုင်းအ၀လေးက ငံကျကျိအရည်လေးတွေ ခိုတွဲလာတော့ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲကို ဆွဲငုံပစ်တာပါပဲ။ နောက်ဆုံးတော့ လျှာတစ်ချက်အသပ်မှာပဲ ကျွန်တော့်လည်မျိုထဲထိတိုင် လေးငါး လျော့လောက်ပန်းထည့်တာနည်းနည်း ငန်ပေမယ့် ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော့် ပါးစပ်ထဲ တစ်ချက်တစ်ချက် ပန်းထည့်တိုင်း ခပ်ကျယ် ကျယ်အော်သံကို မိုးဇော်နှုတ်ဖျားက ထွက်ထွက်လာတာ ကျွန်တော့်ငပဲကို အလိုလိုမတ်မတ်သွားစေသလားနော်။
ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ သုတ်ရည်တွေနှင့်ပြည့်နေတဲ့အပြင် တံတွေးတွေနှင့်လျှံတော့ ကြာရှည်မထိန်းနိုင်မှန်းတွေးမိတော့ ခဏရပ်ကာ မိုးဇော် ရဲ့ ငပဲကိုပါးစပ်ထဲကထုတ်လိုက်တယ်ဗျ။ ကျွန်တော်လည်း ....ကျွန်တော်လည်း သူ့လို ဇာတ်လမ်းတစ်ခု အဆုံးသတ်ချင်သည်ပေါ့။ မတ် မတ်ထောင်ပြီး ထွားနေတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲပေါ်ကို မိုးဇော့်သုတ်ရည်တွေ ပါးစပ်ထဲက ထွေးထုတ်ပြီး လိမ်းလိုက်တယ် ချောဆီသဘောပေါ့ နော်။ ပြီးတော့ မိုးဇော် အိပ်ယာပေါ် ပက်လက်လှဲလိုက်ကာ ပါးစပ်ထဲက လက်ကျန်အရည်အနည်းငယ်ကို လက်ထဲထွေးထုတ်ပြန်ကာ စီးကပ် ကျွန်တော့်ငပဲကို အားရစွာဆုပ်ကိုင်လိုက်တာပေါ့။ ပွတ်သပ်တာ ခဏလုပ်ကာ အားရပါးရ ခပ်မြန်မြန် -ွင်းထုရတာ အရသာရှိပါ တယ်။ ကျွန်တော့်လျှာဖျားက ငံကျိကျိအရသာ၊ မလှမ်းမကမ်းက ရရှိခံစားနေရတဲ့ ကိုယ်ငွေ့နွေးနွေး နှင့် အသက်ရှူသံတို့ကြောင့် စိတ် ခံစားမှုအဟုန်ဟာ မြင့်သထက်မြင့်လာပြီး အိပ်ယာပေါ်မှာ ၀ဲလှည့်မိတဲ့အထိပါပဲလေ။
အချိန်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ အရှိန်ပြင်းစွာ ပန်းထုတ်မိတဲ့သုတ်ရည်တွေဟာ ကျွန်တော့်ဗိုက်သားပေါ်ရွှဲစိုရော။ မိုးဇော်ကိုလှည့်ကြည့် လိုက်ပြန်တော့ ဘေးတစောင်းလှဲရင်း ကျွန်တော့်ကိုကြည့်နေပါတယ်။
စကားဆက်ဖို့ နှစ်ဦးသား စကားလုံးရှာမရကြပါဘူး။ တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက် စိုက်ကြည့်ကာ အတန်ကြာငြိမ်သက်နေကြပြီး အချိန်တွေကြာလာတော့ သူပဲအရင်အိပ်ပျော်သွားသလား ကျွန်တော်ပဲအရင်အိပ်ပျော်သွားသလားမသိ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ကို အိပ်မောကျ သွားကြပါတယ်။
'ဟေ့..အပေါ်က တော်တော်ချစ်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် မနက်စာအသင့်ဖြစ်နေပြီ ဆင်းခဲ့ကြတော့'
အောက်ထပ် ထမင်းစားခန်းအ၀ကထွက်ပြီး လှမ်းအသံပြုလိုက်တဲ့ မိုးဇော် မေမေအသံကြားတော့ နိုးထပြီးယောင်လည်လည်ဖြစ်နေကြ သော ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက် ကြည့်မိကြပြန်တယ်။
Alex Aung (15 May 2012)
စာကြွင်း။ ။ သူငယ်ချင်းတို့အတွက် အပျင်းပြေဖတ်ဖို့ပါ။ ဇာတ်လမ်းကောင်းတာလေးတွေရေးဖို့ကြိုးစားပါဦးမယ်။
Posted by Alex Aung at 10:14 PM No comments:
ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ အေ့စ်ရောဂါနှင့် ကာမတဏှာ (၃)
ထိတ်လန့်ဘွယ်ရာ အေ့စ်ရောဂါနှင့် ကာမတဏှာ (၂)
ထိတ်လန့်ဘွယ်ရာ အေ့စ်ရောဂါနှင့် ကာမတဏှာ (၁)